Fambolen-kazon’ny Ministeran’ny fampianarana ambony sy ny (...)
Fambolen-kazo nataon’ny Ministera
« Adidy masina ho an’ny tanindrazana »
5000 ny isan’ny zana-kazo ahitana karazany sivy nambolen’ny fianakaviam-ben’ny Ministeran’ny Fampianarana ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa (MESupRes) teny Ampangabe ny zoma 26 febroary lasa teo. Anisan’izany ny hazo Millettia pinnata, fantatra kokoa amin’ny anarana hoe Pongamia pinnata. Hazo avy any India izy ity ary ahazoana menaka azo anaovana solika.
Ny MESupReS no voalohany namboly ity karazan-kazo ity tamina fambolen-kazo. Araka ny kabary nataon’ny Sekretera Jeneraly, Profesora Randriamasitina Gil Dany, adidy masina ho an’ny tanindrazana izany ary fandraisana anjara amin’ny fanatanterahana ny vinan’ny Filohan’ny Repoblika mikasika ny handrakofana ala an’i Madagasikara.
Misy orinasa tsy miankina manana tetik’asa hamboly ny Millettia pinnata amin’arivony hekitara eto Madagasikara ary hanodina azy ho solika. Maniry haingana ity karazan-kazo ity ary afaka maka ny azota eny amin’ny habakabaka. Ao amin’ny fianakavian’ny zavamaniry atao hoe Fabaceae no misy azy. Manaraka tsara ny fiovaovan’ny toetr’andro izy satria mahatohitra ny haintany, maniry amin’ny masoandro, manatsara ny tany.
Efa misy ny fikarohana ataon’ny Centre National de Recherches sur l’Environnement (CNRE) izay rantsa-mangaika ao amin’ny Ministera, momba ity zavamaniry ity. Tsara marihina fa ny CNRE sy ny Foibe Fikarohana ampiharina amin’ny Fampandrosoana eny Ambanivohitra (FOFIFA) no nisahana ny famokarana ny zana-kazo. Ny Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Fampandrosoana lovainjafy kosa no nanome ny toromarika tamin’ny fambolena ny hazo.
Hisy ny fanaraha-maso akaiky ny fanirin’ny zana-kazo. Ireto avy ireo karazan-kazo sivy nambolena teny Ampangabe : Millettia pinnata, Eucalyptus camaldulensis, Acacia auriculiformis, Acacia mangium, Jacaranda mimosifolia, Dodonaea viscosa, Fraxinus sp,Dalbergia trichocarpa (palissadre), Ligustrum sp.